Sintomy ny Super Mario Bros ho an'ny Android | Androidsis
Androany aho te-hanolotra anao lalao manaitra ho an'ny Android, amin'ny haavon'ny lalao tany am-boalohany natolotr'i Nintendo tamin'ny taona 80 ho an'ny sehatra filalaovany manokana, izay tamin'izany fotoana izany dia ny "repera". Tsy isalasalana fa miresaka momba ny lalao malaza an'ny Super Mario Bros, amin'ity indray mitoraka ity ao amin'ny kinova Android, a kinova tsy ofisialy na nomen'ny Nintendo alalanaLazaina ny marina, tsy misy zavatra tokony hialona ny lalao Nintendo tany am-boalohany.
Hatramin'izao, izahay dia tsy afaka nankafy ny Super Mario Bros sy ny lalao Nintendo hafa, noho ny fangatahana ho an'ny Android, antsoina hoe Emulator, izay manampy anay amin'ny fampandehanana lalao alaina amin'ny Internet amin'ny endrika am-boalohany ho an'ny sehatra Nintendo. Ny maha samy hafa ny lahatsoratra androany dia ny hanolorantsika lalao misy mivantana ao amin'ny magazay fangatahana ofisialy ho an'ny Android, ny Google Play Store, ary amin'izany dia tsy mila mametraka rindrambaiko na emulateur sarotra isika fa tsy fantatry ny rehetra ny fomba miasa. Ka fantatrao, raha tianao ny fomba filalaovana Super Mario Bros ho an'ny Android raha tsy mampiasa emulator, Manoro anao aho mba tsindrio «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity».
1 Inona no atolotray antsika amin'ny lalao 64 - Super Max Adventure?
2 Mifanaraka amin'ny terminal Android-ko ve ity Super Mario Bros ho an'ny Android ity?
4 Fampidinana maimaim-poana Super Mario Bros ho an'ny Android
Inona no atolotray antsika amin'ny lalao 64 - Super Max Adventure?
Lalao 64 - Adventure Super Max na ny tena izy Super Mario Bros ho an'ny Android Satria azo atao ny lalao Nintendo malaza raha toa ka manana kinova ofisialy ho an'ny Android izy, dia manome antsika ny fahafaha-milalao ny lalao Nintendo malaza sy kilasika avy amin'ny fampiononana sy fiasa natolotry ny terminal Android farany.
Araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary mifatotra amin'ilay lohatenin'ity lahatsoratra ity, izay anehoako anao ny interface lalao avy amin'ny Oneplus One 2 ahy manokana, ny sary, fampisehoana y gameplay ny mitovy miaina mifanaraka amin'ny lalao Nintendo tany am-boalohany.
Mifanaraka amin'ny terminal Android-ko ve ity Super Mario Bros ho an'ny Android ity?
Lalao 64 - Adventure Super Max na inona ilay Super Mario Bros ho an'ny Android izay mifanentana amin'ireo kinova Android 2.3 sy kinova avo kokoa an'ny rafi-piasa finday Google. Mahatonga antsika hiteny an-tsokajy izany dia mifanaraka amin'ny Android rehetra.
Lalao 64 - Adventure Super Max
Dikan-teny mitovy amin'ny lalao Nintendo tany am-boalohany
Kilalao tena tsara nefa tsy mila emulator
Fandoavana vola amin'ny fampiharana
Doka somary mamitaka
Fampidinana maimaim-poana Super Mario Bros ho an'ny Android
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Super Mario Run » Super Mario Bros ho an'ny Android raha tsy mila emulator
Lalao Mario fakana tahaka izany, saingy tsy mitovy amin'ny voalohany. Na ny sary dia tsy mitovy, na ny endrik'ireo ambaratonga dia mitovy. Ary ny rafitry ny fanaraha-maso dia toa manahirana hatramin'ny milaza azy ampy.